နှလုံးရောဂါ - ဝီကီပီးဒီးယား
နှလုံးကြွက်သားတစ်ရှူးသေခြင်းသည် နှလုံးပတ်သွေးကြော၏ အတွင်းနံရံတွင် ကျစ်လျစ်သောအလွှာတစ်ခု နှေးကွေးစွာ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ၎င်းသည်ရုတ်တရက် ကွဲသွားသောအခါ သွေးခဲများဖြစ်ပေါ်စေ၍ သွေးကြောကိုပိတ်ဆို့စေကာ သွေးစီးဆင်းမှုကို ရပ်တန့်စေသောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်။
နှလုံးရောဂါပညာ ၊ အရေးပေါ်ဆေးပညာ
ရင်ဘတ်နာကျင်ခြင်း ၊အသက်ရှူမဝခြင်း ၊ပျို့ခြင်း ၊သတိလစ်မလိုခံစားရခြင်း ၊ချွေးစီးချွေးပေါက်ကျခြင်း ၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ၊လက်မောင်း၊ပခုံး၊ကျော၊လည်ပင်း သို့မဟုတ် ဗိုက်အောင့်ခြင်း
နှလုံးလုပ်အားဆုတ်ယုတ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မှုပုံစံ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊ နှလုံးရပ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် နှလုံးရှော့ခ်ရခြင်း
သွေးတိုးရောဂါ ၊ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ၊ဆီးချိုရောဂါ ၊ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးခြင်း ၊အဝလွန်ခြင်း ၊သွေးတွင်းအဆီဓာတ်မြင့်မားခြင်း
နှလုံးရောဂါ သို့မဟုတ် နှလုံးကြွက်သားတစ်ရှူးသေခြင်းသည် နှလုံး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ထောက်ပံ့နေသော သွေးစီးဆင်းမှု လျော့နည်းခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ရပ်တန့်သွားခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း နှလုံးကြွက်သားကို ထိခိုက်စေရာမှ ဖြစ်ပေါ်သော ရောဂါဖြစ်သည်။အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါပြလက္ခဏာမှာ ရင်ဘတ်နာကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရင်ဘတ်မအီမသာဖြစ်ခြင်း နှင့် ထိုမှတဆင့် ပခုံး၊လက်မောင်း၊ကျော၊လည်ပင်း နှင့် မေးရိုးတို့အထိ ပြန့်နှံ့သွားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။အများအားဖြင့် နာကျင်မှုသည် ရင်ဘတ် အလယ်တည့်တည့် သို့မဟုတ် ဘေးဘက်မှ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး မိနစ်အနည်းငယ် ကြာမြင့်တတ်သည်။ရင်ဘတ်မအီမသာဖြစ်မှုသည် အစာအိမ်ရောဂါကြောင့် ရင်ပူခြင်းနှင့် ဆင်တူနိုင်သည်။အခြားရောဂါပြလက္ခဏာများမှာ အသက်ရှူကြပ်ခြင်း၊ပျို့ခြင်း၊သတိလစ်မလို ခံစားရခြင်း၊ချွေးစေးချွေးပေါက်များထွက်ခြင်း နှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။လူနာ၃၀ရာခိုင်နှုန်းတွင် တမူထူးခြားသော ရောဂါလက္ခဏာများကိုတွေ့ရသည်။အမျိုးသမီးများတွင် ရင်ဘတ်နာကျင်ခြင်းလက္ခဏာ ပြလေ့မရှိပဲ လည်ပင်းနာခြင်း၊လက်မောင်းနာကျင်ခြင်း နှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းလက္ခဏာများသာ ခံစားရလေ့ရှိသည်။၇၅နှစ် နှင့်အထက် လူကြီးများအနက် ငါးရာခိုင်နှုန်းတွင် ရောဂါလက္ခဏာနည်းနည်း သို့မဟုတ် လုံးဝမပြဘဲ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။နှလုံးကြွက်သားတစ်ရှူးသေခြင်းကြောင့် နှလုံးလုပ်အားဆုတ်ယုတ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မှုပုံစံ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊နှလုံးရပ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် နှလုံးရှော့ခ်ရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
နှလုံးရောဂါတွင် နာကျင်မှုခံစားရသော နေရာများပြပုံ။[ရင်ဘတ် နှင့် ကျောတို့တွင် နာကျင်မှုအဖြစ်အများဆုံးနေရာ(အနီရင့်ရောင်) နှင့် နာကျင်မှုအဖြစ်အနည်းဆုံးနေရာ(အနီဖျော့ရောင်)တို့ကိုတွေ့ရပုံ။]
ရင်ဘတ်နာကျင်ခြင်းသည် အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများသို့ ပျံ့နှံ့သည်ဖြစ်စေ၊ မပျံ့နှံ့သည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည် နှလုံးကြွက်သားတစ်ရှူးသေခြင်း၏ အထင်ရှားဆုံးသောရောဂါလက္ခဏာဖြစ်သည်။ချွေးစေးချွေးပေါက်ထွက်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြားလက္ခဏာများလည်း တွဲဖက်ပေါ်ပေါက်နိုင်သည်။
ရင်ဘတ်နာကျင်ခြင်းသည် နှလုံးရောဂါတွင် အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်ပြီး ၎င်းကို တင်းကြပ်သော ၊ ဖိထားခံရသော၊ ညှစ်ခံထားရသော ခံစားချက်မျိုးအဖြစ် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။နာကျင်မှုသည် များသောအားဖြင့် ဘယ်ဘက်လက်မောင်းကို ပျံ့နှံလေ့ရှိပြီး အောက်မေးရိုး၊လည်ပင်း၊ညာလက်မောင်း၊ကျော နှင့် ဝမ်းဗိုက်တို့ကိုလည်းပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
↑ "What Are the Signs and Symptoms of Coronary Heart Disease?". www.nhlbi.nih.gov. September 29, 2014. Archived from the original on 24 February 2015. Retrieved 23 February 2015.
↑ "What Are the Signs and Symptoms of Coronary Heart Disease?". www.nhlbi.nih.gov. September 29, 2014. Archived from the original on 24 February 2015. Retrieved 23 February 2015
↑ Steg PG, James SK, Atar D, Badano LP, Blömstrom-Lundqvist C, Borger MA, et al. (October 2012). "ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation". European Heart Journal. 33 (20): 2569–619. doi:10.1093/eurheartj/ehs215. PMID 22922416.
↑ Valensi P, Lorgis L, Cottin Y (March 2011). "Prevalence, incidence, predictive factors and prognosis of silent myocardial infarction:areview of the literature". Archives of Cardiovascular Diseases. 104 (3): 178–88. doi:10.1016/j.acvd.2010.11.013. PMID 21497307.
↑ "What IsaHeart Attack?". www.nhlbi.nih.gov. December 17, 2013. Archived from the original on 19 February 2015. Retrieved 24 February 2015.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နှလုံးရောဂါ&oldid=511121" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။